Mibaiko ny fitokonan'ny polisy indray ny media sosialy! | Martech Zone
Mibaiko ny fitokonan'ny polisy indray ny media sosialy!
Talata, Janoary 8, 2013 Talata, Janoary 8, 2013 Douglas Karr
Raha mbola fantatry ny olona aho dia manevateva ny manapaka ny polisy amin'ny media sosialy. Tena mandreraka ahy tanteraka izy ireo. Nandritra ny folo taona, ny iray amin'ireo tohan-kevitra izay mitohy hatrany dia ny tokony hifandraisanao amin'ny olona tianao na tsia tsy mahalala -tserasera.
It nipoitra indray omaly rehefa nizara ny lahatsoratr'i Dan Schawbel aho, Maninona aho no manaiky ny fangatahana fifandraisana amin'ny LinkedIn rehetra. Nitanisa antony 5 nifandraisany tamin'ny olon-tsy fantatra i Dan, anisan'izany ny referrals, fikarohana, fahatsiarovan-tena, fitaomana ary marika.
Saingy misy vondron'olona naysayers izay manohy manohana ny finoana fa mahatsiravina ny fomba fanao amin'ny media sosialy na fanitsakitsahana ny fitohizan'ny fotoana maharitra rehefa mifandray amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny olona mbola tsy nifankahita na tsy nifandray taminao ianao. Ny sasany amin'ireo lalàna voatanisa ao anaty resaka dia tsy tokony hifandray raha tsy efa nifanena tamin'olona nifanatrika ianao. Na raha manana a manan-danja fifandraisana aloha.
Ry vahoaka… inona no fampiasan'ny tambajotra sosialy izay mandehandeha eran'ny tanàna, fanjakana, firenena, faritry ny fotoana ary kaontinanta raha tsy ampiasainao izany? Tena mino ianao fa ny fampiasana tsara indrindra an'ity loharano tsy mampino ity dia ny famerenana amin'ny laoniny ny tambajotra ivelanao amin'ny Internet?
Maninona ianao no tsy mandeha fotsiny misintona ny rolodex taloha ary miantso ny sakaizanao any amin'ny lise mba hilalao Dungeons and Dragons?
Fantatrao ve izay antsoiko hoe olona izay tsy nifandraisako tamin'ny media sosialy? Miantso azy ireo aho mety ho mpanjifa, mety ho mpampiasa vola, mety ho mpiasa, mety ho Interns, mety ho namana, mety ho mpiara-miasa, mpivarotra mety, mety ho mpanoro hevitra ary mety ho mpiara-miasa.
Ary eny, te hifandray amin'izy ireo aho. Te hanampy azy ireo aho. Te hihaino azy ireo aho. Te handre izay atolotray aho. Te hifandray amin'ny olona betsaka araka izay tratra aho! Ary rehefa mila fanampiana aho dia te-hanatona azy ireo ary hangataka izany. Hainao?! Mahazo fanampiana be dia be aho fifandraisana Tsy mbola nihaona aho.
Vintana ho antsika rehetra, manana ny fahaizany koa ireo fitaovana elektrônika! Mety hataoko izany raha tsy mahalala fomba izy ireo, manosika, na mandany fotoana. Misy koa ny bokotra spam raha taterina hatrany. Tsy mangataka voa amin'ny olon-kafa na hiteraka ny zanako aho (mbola), mangataka fitaovana fotsiny aho mifandray miaraka amin'ireo olona tena tiako ny mihaona.
Mahatalanjona ahy fa ireo olona mitsikera ny olona momba ny fampifandraisana olona tsy fantany dia tsy hisalasala handeha hamaky ny efitrano feno olona hikotroka ny karatra fiasan'izy ireo eo amin'ny tavanao, na miantso anao mangataka hivarotra ny vokatr'izy ireo. Na izany aza dia mipetraka ao amin'ny rikoriko tanteraka izy ireo raha tsindrio ny bokotra iray amin'ny Internet.
Ity misy hevitra… tazomy ho anao irery ny fitsipinao. Miasa ho ahy ny zavatra ataoko… sy ny tamba-jotra.
Tags: LinkedInfifandraisanatambajotra mifandrayhaino aman-jery sosialyfahalalam-pomba amin'ny media sosialy
Ahoana ny fampifangaroan'ny mailaka amin'ny varotra Multi-Channel
Whitepaper: Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanoratana tolo-kevitra momba ny varotra
8 Jan 2013 amin'ny 1:31 PM
efa nieritreritra kely momba an'ity lohahevitra ity hatrizay.
Inona no antsointsika hoe olona mandika ny lalàna napetraky ny hafa?
Indraindray, antsointsika hoe mpanavao izy ireo. Antsoinay hoe mpisava lalana izy ireo. Antsoinay izy ireo
Fa amin'ny fotoana hafa, antsointsika ny olona izay mandika ny lalàna ho mpanao heloka bevava.
Inona ny fahasamihafana?
Toa tsy hitako izay maha samy hafa ny mpanao heloka bevava sy ny mpanova
tena ny haavon'ny fahefan'ny olona nametraka ny lalàna. Dinihinay ny maro
ho mahery fo ny revolisionera, saingy nandika lalàna izy ireo ary niady
Fa kosa, heveriko fa ny mahasamihafa azy dia tena momba ny lalàna mihitsy: ataovy ny
manampy ny olona ny lalàna, sa manisy ratsy kokoa noho ny tsara?
Mikasika ny media sosialy, maro amin'ireo lalàna napetrak'ireo orinasa ireo
izay manao ny fananana. Facebook dia manana fitsipika about
ny atin'ny sary fonony ary iza no mahazo manana kaonty manokana.
LinkedIn dia manana fitsipika (toro-hevitra bebe kokoa, tena) momba izay
tokony hifandray ianao.
Misy koa ny lalàna izay toa mipoitra avy amin'ny fiarahamonina. “Aza a
jerk, ”ohatra. Na: “Miezaha mitady ho azy, ary avy eo manontany
mba hahazo fanampiana. ”
Mieritreritra aho fa manomboka miampita ny lalan'ny fanavaozana hatrany amin'ny mpanao heloka bevava ianao rehefa
manomboka toa ny olona mpanao heloka bevava. Raha manandrana mifandray ianao
ny olona rehetra ao amin'ny LinkedIn ary mandefa azy ireo mitovy hafatra mitovy, manomboka ianao
mitovy amin'ny spammer. Tamin'izay no nanomboka niresaka momba ny “ny
Toy izany koa, raha miankina amin'ny paikadinao ny fanatsarana ny loharano ianao dia
amin'ny vitsy an'isa amin'ny olona mampiasa izany tetika izany, handeha hitsangatsangana ianao
amin'ny fahatsaran'ny olona ny rariny.
Vato fehizoro ho an'ny fiarahamonina ny fitsipika. Doug nanoratra hoe: "tandremo ny lalànao
ny tenanao. Mety amiko ny zavatra ataoko… sy ny tamba-jotra. ” Mieritreritra an
kinova farany amin'ity: “Tandremo ny tenanao. Ny zavatra ataoko dia mandeha
ho ahy sy ireo mpangalatra banky mpiara-miasa amiko. ”
Misy lalàna ve ao amin'ny media sosialy izay tsy azo foanana? Tsia. Nefa tsy misy
lalàna any amin'ny fiarahamonina tsy misy antony tokony hanoherana izany. Izany no
marina ny antony maha-zava-dehibe ny firesahana hatrany momba ny lalàna, ka fantatsika hoe iza
ireo — raha misy — dia mendrika hotehirizina.
8 Jan 2013 amin'ny 3:04 PM
“Ny lalàna” - ny tiako holazaina dia tsy lalàna mifehy tena akory izy ireo. Tsy mbola misy ny lalàna… ary manandrana manery ny heviny ny olona noho ny fitsipika dia bs.
8 Jan 2013 amin'ny 3:09 PM
“Tsy misy lalàna mbola."
Ahoana no hahalalantsika fa misy ny lalàna? Ary ahoana ny amin'ny lalàna fariparitan'ireo orinasa ao amin'ny TOS azy ireo?
Ary farany, rehetra ny fitsipika dia hevitra fotsiny. Manantena aho fa hevitra nozarain'ny olona maro (fa tsy ny olona manan-kery fotsiny) fa ny lalàna dia manomboka ho hevitra ary mijanona ho hevitra mandrakizay.
8 Jan 2013 amin'ny 3:57 PM
Ny lalàna no mandeha ary tsy mandeha amin'ny orinasanao dia tokony hanampy anao hamaritra ny fomba hampiasanao ireo mpampita vaovao. Ary, mazava ho azy, rehefa mandinika ny fomba fampiasan'ny hafa ny mpampita vaovao ianao dia mianatra izay mety sy tsy mety aminao. Tsy lazainay amin'ny olona fa "tsy afaka" na "tsy tokony" izy ireo… zarainay amin'izy ireo ny vokatr'izany teo amin'ny orinasa hafa taloha ary avy eo mahita ny fomba hitsapana azy nefa tsy manimba ny marika misy azy ireo.
Misy, mazava ho azy, ny olan'ny fanarahan-dalàna izay tsy maintsy harahin'ny olona, ​​saingy tsy ny lalànan'ny media sosialy izany… izany dia lalàna sy lalàna mifehy ny indostria tsy maintsy harahina
Tsy milaza aminao aho fa tsy maintsy manaiky ny fangatahana LinkedIn rehetra ianao. Mizara aminao fotsiny aho fa mahomby ho ahy izany ary tsy misy valiny ratsy. Ka… aza tenenina amin'ny hafa fa tsy tokony hataon'izy ireo… mety ho tsara ho azy ireo izany.
8 Jan 2013 amin'ny 4:48 PM
Na dia junkie LinkedIn aza aho dia tsy manaiky ny fangatahana LinkedIn REHETRA azoko, fa ekeko daholo ireo izay misy dikany hifandraisany na izao na amin'ny ho avy. Fa ny tena tsara dia ny ahafahantsika tsirairay mamaritra ny lalàny na ny lalàny arahintsika ary tsy mila maka tahaka ny ataon'ny hafa.
8 Jan 2013 amin'ny 4:52 PM
Misy spammers mibaribary be etsy sy eroa izay tsy raharahiko. Saingy heveriko fa ny 99% + amin'ireo olona te hifandray amiko dia mifandraika amin'ny indostria misy ahy.
8 Jan 2013 amin'ny 4:53 PM
Manaiky ity hafatra ity aho.
Jan 9, 2013 ao amin'ny 8: 23 AM
Misy ny lalàna, ary avy eo misy ny safidin'ny tena manokana. Ny ankamaroan'ny sehatra media sosialy dia tena tsy dia misy fari-pitsipika mifototra amin'ny namboarina. Ny LinkedIn dia nanao ny fanovana fotoana fohy izay nahafahan'ny iray nangataka fifandraisana amin'ny gob olona, ​​mora be. Roa ihany aho no nofaizina rehefa nampiasaiko hananganana ny rolodex aho, ary inona no nolazain'ireo tranga ireo tamiko momba ireo olona ireo? Mety tsy te hiaraka amin'izy ireo mihitsy aho. LinkedIn dia tsy isalasalana fa nampiasa sombin-kaody mitovy amin'ny maodelim-pankatoavan'izy ireo. Mahasoa ve? Eny, miankina izany. Raha mahita guru ara-tsosialy aho manana fifandraisana roa alina na telo-polo, ary izy ireo kosa dia manana fanamafisana marobe ho an'ny zava-drehetra avy amin'ny media sosialy, handefa mailaka amin'ny marketing, hananganana ny maty, dia manontany ahy roa. Azon'izy ireo natao ve ny nifandray mivantana tamin'ny maro, niara-niasa tamin'izy ireo tamina tetikasa manokana? Sa mandray anjara tsy tapaka amin'ny fampahalalana avo lenta sy mifandraika (amin'ny teny hafa, mahasoa) ho an'ny besinimaro izy ireo? Sa sanatria fombam-pivavahana laza fotsiny?
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia fantatsika rehetra rahateo rehefa nokasihina tamin'ny fomba tsara isika, na tamin'ny fomba ratsy.
10 Jan 2013 amin'ny 12:00 PM
Doug: Ekeko fa ny habe iray dia tsy mifanaraka amin'ny rehetra, saingy misy fitsipika iray manan-danja IS - ny fifanarahan'ny mpampiasa LinkedIn. Noho izany antony izany, sy ny sasany hafa, mifantina tsara aho raha ny amin'ny fanaovana fifandraisana. Ity ny vola azoko roa: http://linkedinstitute.wordpress.com/2013/01/10/its-about-connecting-not-collecting/
10 Jan 2013 amin'ny 12:05 PM
Adihevitra tena mifandanja, Anthony. Azontsika atao ny miady hevitra momba ny fifanarahan'ny mpisera LinkedIn nandritra ny fotoana kelikely, satria toa tsy mihinana ny sakafon'ny alikany izy ireo. Midira ao amin'ny LinkedIn dieny izao dia hahazo lisitry ny olona izay anoroan'izy ireo anao hifandray… na inona na inona ny tena fifandraisany amin'izy ireo. Cheers!
10 Jan 2013 amin'ny 12:16 PM
Hevitra tena tsara. Tsy voatery hihinana fanafody omen'ny dokotera foana anefa isika. : ^) Misaotra nanampy tamin'ny resaka!